KACDOONKA SHACABKU WUU GUULAYSAN Doona. – Xeernews24
KACDOONKA SHACABKU WUU GUULAYSAN Doona.
Kacdoonka shacabka ee dulmidiid waxuu kasoo gudbay levelkii 1aad, kadib kolkuu burburiyay, diggada iyo dambaskana ka dhigay xeeyndaabkii weeynaa ee cabsida. wiilal iyo Gabdho dadkooda iyo deegaankooda u damqanaya, ayaa makarafoono iyo codbaahiye yaal aad u cod dheer afarta jahaba kaga afuufay dulmiilihii weynaa ee Abdi Iley. kolkaasuu argagaxay, anfariiray oo ay illintu ka da’aysaa.
Kacdoonku waxuu hada wixii ka dambeeya u gudbayaa Levelkiisii 2aad, taasoo macnaheedu yahay in si koox koox , beel Beel, Gobol Gobol, Magaalo Magaalo ah dadku u kacayaan dulmigana ooga dhiidhiyayaan, gaar ahaan waxaa diyaar ah dadkii gudaha joogay ineey kacdoonka kusoo biiraan. Waxaan rabaa inaan idiin sheego Cabdi ileey dagaalo badan baa ku socda, gabood faladdii hore ee shacabka u geeystay oo intooda badani ay qoran yihiin diiwaankana kujiraan ayuu la ciirciirayaa, awood ooma uu laha maanta inuu culayska isku siibadiyo. Anaguna hadaanu kooxda dulmi diin nahay waxanu idiin balan qaadeeynaa innaan cidkasta oo shacab ah oo wax la yeelo diiwaanka gallino una gudbino hay’adaha xuquuqul insaanka si cadaaladda loo horkeeno cidii dulmigaa geeysatay.
waxaan rabaa inaan halkan digniin oogu jeediyo dhalinyarada gaar ahaan ciidamada Liyuu Poliska iyo cid walboo daalinkaas u adeegta; ku quusqaata dhacdadii iyo dagaalkii Oromada ee Cabdi illeey idin galiyay, kolkii siyaasadii Federaalka Oromadu kaga adkaatay si uu asaga iyo masuuliyiinta qaraabadiisa u badbaadiyo wuxuu ku kaarta baxay oo uu dhiibay dadkii masaakiinta ahaa ee uu asagu amarka siinayay, waxuuna ku eedeeyay ineey Oromada barakicin teedii masuul ka ahaayeen.
Sidaa daraadeed ugu horeeyn ogaada in Cabdi Illeyna idinku kaarta baxayo shacabkiiniina aad leeynaysaan. Dhinaca kale shaqsi kasta oo shacabka kacdoonka wada wax yeela u geeysta, haduuba kaarta baxa Abdi illeey ka badbaado diiwaanka ayuu noogu jiraa oo waa danbiile aan marnaba cadaaladda ka fakanaynin. Ogaada xiligii cadaalad darada iyo isla xisaabtan la’aantu wuu dhamaaday, qof walba waxuu geeystay weey diiwaan gashantahay waana lagula xisaabtami. Sidaa daraadeed safka kacdoonka soo gala oo noqda kuwa shacabkooda la safan una damqanaya.
Wuu socdaaye aan israacino!!
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/07/thumb.jpg 210 210 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-01-16 01:29:552018-01-16 01:29:55KACDOONKA SHACABKU WUU GUULAYSAN Doona.
SAWIRRO: Arin Layaab leh oo Dadka Muqdisho ay Maanta arkeen(Xoolo Gowracan oo... DAAWO: Madaxweyne Farmaajo Oo Gaadhay Magaalada Cadaado Iyo Soo Dhaweyn Cajiib...